दीपक गौतमकाे प्रश्न– माइक्रोबसका यात्रुलाई कारमा कोच्दा दुर्घटना नभएर के हुन्छ ? (अन्तर्वार्ता) - Everest Dainik - News from Nepal
निर्माण व्यवसाय नै समृद्धि र विकासको मुख्य आधार हो भन्ने बुझ्नु जरुरी
दीपक गौतम, नेपाल निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा चर्चित नाम हो । इलाम जिल्ला स्थायी घर भएका गौतम् गजुरमुखी निर्माण कम्पनीका प्रमुख छन भने हाल नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ केन्द्रीय कार्यसमितिमा सदस्यको जिम्मेवारीमा छन् । संगठनात्मक र कार्यक्षेत्रका आधारमा आफूसँग लामो दक्षता र अनुभव रहेको जिकिर गर्दै गौतम निर्माण व्यवासायको विकासलाई आर्थिक समृद्धिको पहिलो कडी मान्छन् । ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को सरकारको लक्ष्यमा निर्माण व्यवसाय मुख्य साझेदार रहेको बताउनु हुने गौतम निर्माण व्यवासयका क्षेत्रमा बृहत अन्तक्रियाको वकालत समेत गर्दै आएका छन् । निर्माण व्यवसायी महासंघको असन्न निर्वाचनमा महासचिव पदमा उम्मेदवारी दिइरहेका गौतमसँग एभरेष्टदैनिक टिमले लिएको अन्तर्वाता यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं ।
एउटा जटिल अवस्थामा निर्माण व्यवसायी महासंघको निर्वाचन हुन गइरहेको छ । महासचिवमा तपाईको उम्मेदवारी किन ?
मैले आफ्नो संगठनात्मक र व्यवसायिक अनुभवका आधारमा यो पदका लागि दावी गरेको हो । मैले एक कार्यकाल जिल्लामा, एक कार्यकाल क्षेत्रमा र एक कार्यकाल केन्द्रीय कार्यसमितिको अनुभव बटुलेको छु । व्यवसायिकरुपमा २४ वर्ष नेपालमा र ४ वर्ष विदेशमा निर्माण व्यवसायको अनुभव छ । कतारमा पनि मेरो कम्पनी छ ।
नेपालको निर्माण व्यवसाय क्षेत्र इतिहासको सबैभन्दा कठिन क्षणमा रहेको छ । एकातिर चन्दा आतंक र सुरक्षा थ्रेट बढेर गएका छन् । अर्कोतिर सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुलाई गरिने तल्लोस्तरको व्यवहारले यो क्षेत्र जटिल अवस्थामा पुगेको छ ।
आज देशमा यति ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकार गठन भएको अवस्था छ । सरकारले पनि आर्थिक समृद्धि र विकास नै सरकारको एउटा मात्र प्रमुख एजेण्डा बताएको छ । अब सरकारको त्यो विकास र समृद्धिको एजेण्डालाई पुरा गर्न सबैभन्दा नजिकको दरिलो पार्टनर निर्माण व्यवसायी हो । यसका लागि दुबै पक्षबीच आवश्यक उच्चस्तरको समन्वय जरुरी छ ।
नेपालमा हेर्नुस त, हाम्रो १६० किलोमिटर उत्तर दक्षिणको भूगोलमा सगरमाथा जस्तो अग्लो ठाउँदेखि केचनाकल जस्तो खोंचसम्म रहेको छ । निर्माणका लागि भौगौलिक प्रतिकुलता छ नेपालमा । त्यसैले नेपालमा विदेशी कम्पनीहरुलाई काम गर्न त्यति सहज छैन ।
सरकारमा अनुभवको कमीले समेत कतिपय अवस्थामा यस क्षेत्रको गाम्भीर्यता नबुझिएको हुनसक्छ । अहिले एउटा दलको स्पष्ट बहुमत, दुई तिहाईसहितको दरिलो सरकार छ । संसदीय व्यवस्थामा दुई तिहाई बहुमत ठूलो कुरा हो । संविधान नै परिवर्तन गर्न सक्छ । यस्तो शक्तिशाली सरकार भएको बेला हाम्रा कुरा बुझाउन संगठन र कार्यक्षेत्रमा पनि राम्रो अनुभव भएको व्यक्ति आवश्यक छ । त्यसैले मेरो यो अनुभवका आधारमा पनि मैले आफूलाई यो पदका लागि योग्य र सक्षम ठानेर उम्मेदवारी दिएको हो ।
तपाईंका मुख्य एजेण्डा के छन ?
मेरो दुईवटा मुख्य एजेण्डा र स्पष्ट भिजन छन् । मैले वर्षौंदेखि दुईवटा कुरा गरिरहेको छु । पहिलो– क्षमता र दक्षता अनुसार काम (ठेक्का) पाउनुपर्छ । किनभने नेपालमा अहिले निर्माण व्यवसायका क्षेत्रमा आएका जतिपनि नकारात्मक समाचार छन, ती सबै भनेको क्षमता भन्दा बढी काम एउटा कम्पनीले पाएको कारण आएका समस्या हुन् भन्ने मेरो अनुभवले बुझाएको कुरा हो ।
मेरो दोस्रो एजेण्डा भनेको बृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रम हो । यो किन त भन्दा निर्माण व्यवसायलाई निरपेक्षरुपमा हेरेर मात्रै पुग्दैन । यसको बहुआयामिक चरित्र छ र सोही अनुरुप योसँग सम्बन्धित सबै पक्षबीच साझा धारणा निर्माण भए मात्र हामीले सही अर्थमा निर्माण व्यवसाय क्षेत्रलाई दरिलो बनाउन सक्छौं । यो बृहत अन्तक्रिर्या कार्यक्रम नेपाल सरकार या महासंघ एक्लैले गर्न सक्दैन ।
कस्तो खालको अन्तरक्रिया, अझ स्पष्ट भन्दा ?
विकास सिद्धान्तहरुले के भन्छन् भने कुनै पनि कामको योजना जति राम्रो भयो त्यो काम त्यति राम्रोसँग सम्पन्न हुन्छ । र, योजनालाई जति बढी समावेशी र सबैपक्षको स्वामित्व हुने गरि बनायो कार्यान्वयनमा आइपर्ने चुनौती त्यति नै कम हुन्छन् । त्यसैले कुनै पनि काम थाल्नुपूर्व राम्रोसँग योजना बनाइयो भने, प्लान राम्रो भयो भने त्यसलाई आधा काम सकिएको भनिन्छ ।
यो कुरा निर्माण व्यवसायका क्षेत्रमा मुख्यरूपमा लागु हुन्छ । निर्माण क्षेत्र भनेको निकै वृहत क्षेत्र हो । यसमा धेरै क्षेत्र जोडिएका हुन्छन् । जस्तो कुनै आयोजना क्षेत्रमा वन, ढल, विद्युत प्राधिकरण, कामदार सप्लाई गर्ने एजेन्सी, स्थानीय निकाय, निर्माण सामग्रीका निकाय, पेट्रोलियम पदार्थ, सरकारको नीति, बजेटसँग सम्बन्धित सबै निकायहरु संलग्न हुन्छन् । त्यसैले कुनै एक निकायले मात्रै यसका समस्या हल गर्न सक्दैन ।
उदाहरणका लागि, कलंकी-नागढुंगा सडक चिनियाँ कम्पनीले यदि चीनमा बनाउनु परेको भए एक-डेढ महिनामा सक्थ्यो रे भनिन्छ । तर यहाँ उसले त्यो गर्न सकेन । किनभने कतिपय अवस्थामा समस्या निर्माण कम्पनीमा हुँदैन बरु त्यसका लागि कस्तो वातावरण छ भन्नेमा हुन्छ ।
हिजो निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित हाम्रा माग लगेर जाँदा कहाँ जाने र कसलाई सुनाउने भन्ने समस्या थियो । आज एउटा मन्त्रीलाई भेट्यो, उसले गर्छु, हुन्छ भन्दाभन्दै अर्को मन्त्री आइसक्छन् । तर आज त्यस्तो समस्या छैन । आज देशले स्थायी प्रकृतिको सरकार पाएको छ । त्यसैले सरकार र गैर सरकारी क्षेत्रमा सम्बन्धित सबै निकायबीच अहिलेका तत्कालीन समस्या र दीर्घकालीन योजनाका लागि बृहत अन्तरक्रिया आवश्यक छ र त्यसलाई स्पष्ट भिजनसहित मैले अघि बढाउन सक्छु भन्ने मेरो विश्वास हो ।
राजनीतिक दबाबमा ठेक्का पाउने र काम समयमा नसक्ने त देखिएकै होइन र ?
राजनीतिक दवावमा ठेक्का पाउने कुरा सत्य होइन । सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत ठेक्का हुने हुँदा त्यहाँ राजनीतिक दवाबले अर्थ राख्दैन । तर समस्या हाम्रो खरिद प्रक्रियामा हो ।
मैले माथि पनि भने अहिले प्राविधिक प्रक्रियामा पास भएका कम्पनीहरुमध्ये जसले कम दररेटमा बोलकबोल गर्छ, उसलाई ठेक्का दिइन्छ । यसले क्षमता अनुसार काम दिनुपर्ने मुख्य सिद्धान्तको उपेक्षा गर्छ । कम्पनीको क्षमता भन्दा बढी उसलाई बोकाइयो भने उसले गुणस्तर र समय दुबैमा सम्झौता गर्छ ।
जस्तो एउटा माइक्रोबसमा अटाउने जति मान्छे कारमा हाल्न खोजे टायर पडकिन्छ, दुर्घटना हुन्छ । निर्माण व्यवसायका क्षेत्रमा पनि त्यस्तै हो । काम र क्षमताको मूल्यांकन गरेर सम्झौता गर्ने प्रक्रिया शुरु गर्ने र काम सम्पन्न गर्न सम्बन्धित सबै पक्षबीच साझा धारणा र प्लानिङ हुने हो भने यहाँका अधिकांश समस्या हल हुन्छन् ।
नेपालमा ०४६ सालपछि हेर्दा २०४८ देखि २०५३, ०५४ सम्मको समय निर्माण व्यवसायका क्षेत्रमा स्वर्णिम युग जस्तै थियो । अधिकांश निर्माण व्यवसायी कम्पनी त्यही समयमा जन्मिए । तर त्यही समयमा माओवादी आन्दोलन झांगिसकेको थियो । यो आन्दोलनको पहिलो निशाना निर्माण व्यवसायी बने ।
याे पनि पढ्नुस निर्माण व्यवसायीद्वारा बालुवाटार अगाडि धर्ना
गाउँका धनीमानी त शहरबजार या राजधानी आउन सक्थे तर निर्माण व्यवसायी त काम गर्न जिल्लामा नै बस्नु पऱ्‍यो । यसरी २०६३, ०६४ सम्म आइपुग्दा यो क्षेत्र थिलथिलो भयो । त्यसैले बाहिरबाट हेर्दा ठेकेदारले काम गरेन, काम भएन भन्ने पर्छ । तर यसभित्रको अवस्थाको बारेमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिने काम भएको देखिन्न ।
कतिपय अवस्थामा समस्या निर्माण कम्पनीमा हुँदैन बरु त्यसका लागि कस्तो वातावरण छ भन्नेमा हुन्छ ।
सरकारले गम्भीरतापूर्वक यो विषयलाई लिएर निर्माण व्यवसाय क्षेत्रलाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ भनेर सोच्नु जरुरी छ । हामीले के देख्छौं भने विदेशी कम्पनीहरुले नेपालमा आएर गर्ने कामहरु निकै थोरै मात्र सफल भएका छन । नेपालमा आएर काम गर्नसक्ने अवस्था सारै अप्ठ्यारो छ ।
विदेशतिर हेर्दा, युरोप या खाडी मुलुकमा हेर्दा त्यहाँ एउटै भौगौलिक प्रकृतिमा हजारौं किलोमिटर लामो काम हुन्छ । लण्डनमा हजारौं किलोमिटर सम्मैसम्म र चिसो छ भने खाडीमा उच्च तापक्रममा हजारौं हजार किलोमिटर भुगोल छ । तर नेपालमा हेर्नुस त, हाम्रो १६० किलोमिटर उत्तर दक्षिणको भूगोलमा सगरमाथा जस्तो अग्लो ठाउँदेखि केचनाकल जस्तो खोंचसम्म रहेको छ । निर्माणका लागि भौगौलिक प्रतिकुलता छ नेपालमा । त्यसैले नेपालमा विदेशी कम्पनीहरुलाई काम गर्न त्यति सहज छैन ।
अहिले प्राविधिक प्रक्रियामा पास भएका कम्पनीहरुमध्ये जसले कम दररेटमा बोलकबोल गर्छ, उसलाई ठेक्का दिइन्छ । यसले क्षमता अनुसार काम दिनुपर्ने मुख्य सिद्धान्तको उपेक्षा गर्छ । कम्पनीको क्षमता भन्दा बढी उसलाई बोकाइयो भने उसले गुणस्तर र समय दुबैमा सम्झौता गर्छ । जस्तो एउटा माइक्रोबसमा अटाउने जति मान्छे कारमा हाल्न खोजे टायर पडकिन्छ, दुर्घटना हुन्छ । निर्माण व्यवसायका क्षेत्रमा पनि त्यस्तै हो ।
यसले के देखाउँछ भने नयाँ र विकसित नेपालमा निर्माणको काम नेपाली कम्पनीहरुले नै सक्छन् । निर्माण व्यवसायीलाई उद्योगहरुको पनि उद्योग भनिन्छ । जस्तो, सिमेन्ट उद्योगका लागि त्यो उसको अन्तिम उत्पादन हो भने हाम्रा लागि त्यो कच्चा पदार्थ हो । तर आजसम्म सरकारले हामीलाई उद्योगको मान्यता दिएको छैन, त्यो बिडम्बना हो ।
याे पनि पढ्नुस गृहमन्त्रीको निर्देशनपछि दुई निर्माण व्यवसायी पक्राउ
नेपालको विकास र समृद्धिका लागि मुख्य तीन क्षेत्र छन्– जलस्रोत, पर्यटन र कृषि । तर यी क्षेत्रको विकासका लागि सबैभन्दा पहिलो शर्त भनेको पूर्वाधार विकास हो । यो पूर्वाधार विकास कसले गर्छ भन्दा निर्माण व्यवसायीले नै गर्छ । कुन निर्माण व्यवसायीले गर्छ भन्दा नेपाली परिस्थितिमा विदेशीले गर्न नसक्ने हामीले भनिसक्यौं । त्यसैले यो नेपाली निर्माण व्यवसायीले नै गर्न सक्छन् । यसरी नेपाली निर्माण व्यवसायीले पूर्वाधार निर्माणमा जति कुशलतापूवर्क काम गर्ने वातावरण पाउँछन त्यही आधारमा कृषि, जलस्रोतलगायतका क्षेत्रको विकास हुन्छ ।
त्यसैले सरकारले माया गरेर, फकाएर निर्माण व्यवसायीका लागि काम गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । हामी विकास र समृद्धिको सबैभन्दा नजिकका साझेदार हौं । हामी त्यो रुपमा प्रस्तुत हुन तयार छौँ । सरकार पनि दुई तिहाई बहुमतको सरकार छ । त्यसैले नयाँ नेपाल बनाउन हामीहरुको योगदान महत्वपूर्ण हुन्छ ।
अब नयाँ कार्यसमिति बनेपछि यी सबै कुरा सकारात्मक रूपमा बुझाउनेतिर लाग्छौं । नयाँ नेपाल बनाउन सबै पक्ष होमिनुपर्छ र सबैले जित्ने (विन विन) को वातावरण बनाउन लाग्नुपर्छ ।
हामी सबै नेपाली हौं । समृद्ध र सुखी नेपालको निर्माण हामी सबैको चाहना हो । त्यसैले सकारात्मक सोच लिएर राष्ट्र निर्माणको महान अभियानमा सरकारसँग हातेमालो गरेर अघि बढन महासंघ तयार छ । सरकारका तर्फबाट पनि यही अनुरुपको सहयोगी वातावरणको अपेक्षा महासंघले गरेको छ ।
नेपालमा अहिले निर्माण व्यवसायका क्षेत्रमा आएका जतिपनि नकारात्मक समाचार छन, ती सबै भनेको क्षमता भन्दा बढी काम एउटा कम्पनीले पाएको कारण आएका समस्या हुन् भन्ने मेरो अनुभवले बुझाएको कुरा हो ।
समस्या धेरै छ । हामी पनि पटक्कै दूधले नुहाएको भन्ने होइन । समस्या छन् । हामी पनि समस्यामा छौं, देश पनि समस्यामा छ । तर समस्या मात्रै भनेर भएन । यसको सकारात्मक समाधान निकाल्नुपर्छ । त्यसैले सबै पक्ष बसौं, सबैतर्फका समस्यामाथि छलफल गरौं । देश निर्माणको महान अभियानमा अघि बढौं ।
तपाईको जित्ने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?
म पूर्ण आशावादी छु । सरकारसँग यी कुरा राख्न पनि मेरो जीतले ठूलो भुमिका खेल्छ । सबै मिलेर केही गरौं भन्ने युवा जमात मसँग छ । अनुभव छ । केही नयाँ गर्ने भिजन छ । त्यसैले म विजय हुनेमा ढुक्क छु ।
ट्याग्स: Deepak Gautam, दीपक गौतम, निर्माण व्यवसायी